Imandarmedia.com.np: अन्ततः फुट्ने नै भो कमल थापाको पार्टी, कुन नेता कता ?
Newspaper » अन्ततः फुट्ने नै भो कमल थापाको पार्टी, कुन नेता कता ?
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेर बसेका छन् । उनी उपप्रधानसहित कुनै एक मन्त्रालय पाएमा मात्रै पनि सरकारमा सहभागी हुने छन् ।
स्रोतका अनुसार, थापाबिनै सरकारको नेतृत्व गरेर पार्टी सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा दीपक बोहरा छन् । दीपकको लाइनमा सुनिल थापा, रामकुमार सुब्बा, रेशम लामा, कमला शर्मा, सीता लुइँटेल, बिराज विष्टलगायतका नेता छन् ।
चितवनमा पराजयपछि पूर्व भूमिसुधार मन्त्री बिक्रम पाण्डे पनि कमल थापासँग आगो छन् । अहिले यही समूह सरकारमा जानुपर्ने दबाब थापालाई दिइरहेका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार, यो समूहले सकेसम्म थापालाई मनाउने, नमाने पार्टी विभाजन गर्ने सोँच बनाएका छन् ।